ဆီးရီးယား ဂိုတာအရှေ့ပိုင်းမှ သူပုန်နှင့် မိသားစု ၆ဝဝဝ ကျော် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေ - Yangon Media Group
ဆီးရီးယား ဂိုတာအရှေ့ပိုင်းမှ သူပုန်နှင့် မိသားစု ၆ဝဝဝ ကျော် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေ
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ဒမတ်စကပ် မြို့ ဂိုတာအရှေ့ပိုင်းတွင် မတ် ၂၁ ရက် ညဉ့်သန်းခေါင်အချိန်မှစကာ သူပုန်များနှင့် ၎င်းတို့ မိသားစုအပါ အဝင် လူဦးရေ ၆ဝဝဝ ခန့်တို့သည် ဆုတ်ခွာနေကြပြီဟု အစိုးရပိုင် SANA သတင်းအေဂျင်စီက မတ် ၂၈ ရက်က သတင်းထုတ်ပြန်ကြေ ညာလိုက်သည်။
ဆုတ်ခွာလူဦးရေ ၆၄၃၂ ဦး တွင် သူပုန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅၂၁ ဦး ပါဝင်ပြီး ဂိုတာအရှေ့ပိုင်း၌ စတုတ္ထ အသုတ် မြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေး သူများအား လိုအပ်မည့် စားရေ ရိက္ခာ၊ သောက်ရေများအား အာ ဏာပိုင်များက ဝေငှပေးခဲ့ကြရ သည်။ Idlib ပြည်နယ်အရှေ့ မြောက်ပိုင်းဒေသ သူပုန်များ သိမ်း ပိုက်ထားရာမှာ အစိုးရစစ်ဆင်ရေး များကြောင့် မတ် ၂၄ ရက်နေ့မှ မတ် ၂၇ ရက်အထိ သူပုန်ဦးရေ စု စုပေါင်း ၁၃ဝဝဝ မြို့ကို စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးကြပြီး ဖြစ်သည်။ ဒေသ စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူများအား အာ ဘင်း၊ ဂျိုကာ၊ ဇမယ်ကာနှင့် အန်းတာ မာမြို့များတွင် အာဏာပိုင်များက ခွဲဝေ နေရာချထားပေးခဲ့သည်။ Idlib မြို့နှင့် ဆင်ခြေဖုံးများအား ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်း သိမ်းပိုက်ထားသော Failaq al-Rahman ဦးဆောင်သူ ပုန်တပ်ဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့သိမ်း ပိုက်ထားသော နေရာများအား စွန့်လွှတ်ပေးရန် မတ် ၂၃ ရက်က သဘောတူညီခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံ၏ ကြားဝင်ဆောင်ရွက် ပေးမှုအရ Ahrar al-Sham သူ ပုန်တပ်ဖွဲ့များကလည်း ၎င်းတို့ သိမ်းပိုက်ထားသော ဂိုတာအရှေ့ ပိုင်းနှင့် ဟာရတ်စ်တာမြို့များမှ ဆုတ်ခွာပေးရန် မတ် ၂၃ ရက်က သဘောတူညီခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁ဝ၅ ကျယ်ဝန်းသော ဂိုတာအရှေ့ပိုင်းဒေသသည် ဆီး ရီးယားနိုင်ငံ၏ စပါးနှင့် လယ် ယာကိုင်းကျွန်းသီးနှံများ စိုက်ပျိုး ဖြစ်ထွန်းရာဒေသ ဖြစ်သည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင်း ဂိုတာ အရှေ့ပိုင်း အပါအဝင် ဒေသများ၌ သူပုန်အဖွဲ့ဖြစ်ကြသော The Islam Army? Failaq al-Rahmar, Ahrar al-Sham နှင့် The Levant Liberation Committee ခေါ် Nusra Front အဖွဲ့များ ထြ<ွက လှုပ်ရှားကာ အစိုးရအား ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းဒေသရှိ ပြည်သူ ၄ဝဝဝဝဝ ကျော်အား လူမှုထောက်ပံ့ရေးကူ ညီသူများအား ကုလသမဂ္ဂလူသား ချင်း စာနာထောက်ထားရေးအဖွဲ့ များက ဦးစီးကာ ထောက်ပံ့ကူညီ မှုများ ပေးနေရသည်။ တိုက်ပွဲများ အတွင်း အရပ်သား ၁ဝဝဝ ခန့် စစ်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်သည် ဟု ဆီးရီးယားအရေး တက်ြ<ွကလှုပ် ရှားသူများက ထုတ်ဖော်ပြောဆို လိုက်သည်။
ထိုင်းတွင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ၉ဝဝဝ ခန့်သာ အွန်လိုင်းမှ မှတ်ပုံတင်
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် လုပ်ငန်းခွင် အကြို မူလတန်းဆရာ အတတ်ပညာ ဝင်ခွင့်သင်တန်း ၇ဝဝဝ ကျော် တက်ရောက်ခွင့်ရ
ရွှေဘိုမြို့တွင် ပိုက်ဆံအိတ် လုယက်သူများကို အခင်းဖြစ်ပွားပြီး သုံးနာရီအတွင်း ဖမ်းမိ
နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ရေနံချောင်းမြို့ ပင်းချောင်း၌ အပူရှောင်သူနှင့် အပန်း?
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့တွင် ကျင်းပမည့် ရခိုင်လူငယ် ညီလာခံကို ပြည်နယ် အစိုးရ ခွင့်ပြ?